Khudbadii Khudbadii Khudbadii Khudbadii Xogta Muhiimka ah ee Mirai Botnet Attack
Dyn waa mid ka mid ah shirkadaha ugu sarreeya ee gacanta ku haya tiro badan oo ka mid ah nidaamka magac domain waxaa lagu dhuftay Mirae botnet oo keeney in ka badan 100,000 oo shirkado online ah. Sida laga soo xigtay warbixinnada ay sameeyeen shirkadda Dyn Dynamics, weerarka Mirae botnet wuxuu ahaa mid ka mid ah noocyada ay leedahay weerarka weerarka oo ah 1.2Tbps - mobile app development company.
Andrew Dyhan, oo ah Semt Maamulaha Guusha ee Macaamiisha, ayaa sheegaya in weerarrada Mirae ay ku dhintaan dhimasho marka la barbardhigo diidmada weerarrada adeegga. Weerarrada DDoS waxay ku xiran yihiin isku xirka shabakad khaas ah oo aan wali gaadhin illaa iyo inta uu ka burburayo. Sida laga soo xigtay bogga blog-ka ee daabacan Dyn, Mirae botnet waxaa laga soo saarey shabakadaha internetka (IoT) qalabyada sida ciyaartoyda DVR iyo kaamirooyinka digital'ka
Sidee ayuu botnet u shaqeeyaa?
Marka laga reebo in uu ku lug lahaa weerar lagu weeraray Dyn, Mirai botnet ayaa sidoo kale lala xiriiriyay weerarkii ku dhacay barta ammaanka ee macluumaadka, 'Krebs on Security,' waxaa soo maray Brian Krebs, oo ka mid ah qoraalladii hore ee Washington Post..Sida laga soo xigtay wargeyska Brian Krebs, weerarkii ku dhacay boggiisa ammaanka ee macluumaadka waxaa uu lahaa weerar xooggan oo ah 665Gbps.
Xilliyadoodii ugu dambeeyay ee uu sameeyay David Fidler, oo ah madaxa fulinta ee guddiga arimaha dibadda, wuxuu ku nuuxnuuxsaday in diidmada adeegga loo dhiibay ee Dyn wuxuu ku dhacay diiwaanka maaddaama ay sidoo kale hoos u dhigtay goobaha ugu sareeya sida Netflix, Guardian, CNN, Twitter, iyo Reddit. Mirai botnet waxay inta badan saamaysay goobaha ku yaalla Yurub iyo Maraykanka.
Fidiliye, khabiir ku takhasusay internetka, wuxuu soo saaray warbixin ku saabsan weerarka Dyn'ah, halkaas oo Fidler uu sheegay in uusan dib u soo celin karin cyber-weerar weerar xooggan oo ka badan 700Gbps. David Fidler ayaa sidoo kale ku daray in ururrada iyo shirkadaha ay dhibaato ka haysato amniga 'Internet of Things Things', halkaas oo aanay jirin xalka ugu wanaagsan ee loo soo jeediyay in lala dagaallamo weerarka sida qof ka tagay Dyn, oo ah dhibanaha internetka.)
Sida laga soo xigtay warbixintii dhowaan soo saartay khabiirada internetka iyo hay'adaha dawliga ah, Dyn wuxuu ahaa mid u nugul dhibaatada amni darada ee IoT. Xilligan, baaritaan ay sameeyeen Xuquuqda Isku-xirka Xuquuqda Aadanaha ayaa sii socota, halkaas oo ay shirkaddu ku sheegtay in Mirai botnet ay tahay weerarka ugu wayn ee internetka oo khalkhal galinaya internetka iyo in la keeno website-yo waaweyn oo ku saleysan Maraykanka iyo Yurub.
Joe Weiss, oo ah madaxa fulinta sare ee fulinta amar-garsiga iyo saxafiga qoraaga hanjabaad elektaroonig ah, ayaa sidoo kale ka hadlay khatarta khatarta ah ee Mirai botnet. Sida laga soo xigtay Weiss, Mirai botnet waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay bedelaadaha warshadaha internetka, maadaama ay adag tahay in la saadaaliyo qaabka cusub ee weerar ee Mirae botnet.
Joe Weiss ayaa sidoo kale qeexday in qaybinta diidmada weerarka adeegga ay ku bilaabmayso weerar gaar ahaaneed ku saleysan oo isbedelaya qaabab cusub oo weerar ah. Weiss ayaa soo gabagabeeyay isagoo sheegaya in Mirae botnet ay tahay nooca weerarada ka tagi kara shirkad kasta oo dhibbanaha internetka ah. Sida laga soo xigtay isaga, ka shaqeynaya sida loola dagaalamo botnets waa xalka keliya ee ka ilaalin kara nidaamka kumbuyuutarrada in uu yahay dhibane hanjabaad elektaroonik ah. Ka feker inaad noqoto feejignaan iyo falanqee inta badan ee baabuurtaada ka timaaddo si looga fogaado in laga dhigo botnets